स्वास्थ्यकर्मीहरू बेलामा खानै पाउँदैनन् -
ललितपुर महानगरमा कोभिशिल्डको दोस्रो मात्रा ७७ वर्षदेखिकालाई
ललितपुर महानगरले जारी ग¥यो कोरोना उपचार राहत निर्देशिका
लकडाउन अवधिभर काम गर्न नसक्ने परिवार र आम्दानीको अन्य स्रोत नभएकालाई ...
रातो मछिन्द्रनाथ मन्दिर पुनर्निर्माणमा स्थानीयको श्रमदान(With Video & Pic)
गोदावरी नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जन सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीसँग
सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबै नेपालीलाई खोप ः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं महानगरमा उमेर समूह अनुसार छुट्याइयो खोप लगाउने दिन, कुन दिन–कुन उमेरका ...
लकडाउन अवधिभर काम गर्न नसक्ने परिवार र आम्दानीको अन्य स्रोत नभएकालाई राहत वितरण
Home›विविध›जीवनशैली/स्वास्थ्य›स्वास्थ्यकर्मीहरू बेलामा खानै पाउँदैनन्
१६ लिटर अट्ने सेनिटाइजरको ट्यांकी बोकेर शववाहन, स्ट्रेचर र शव ल्याउने बाटो वरिपरि छर्किंदै गइन् । शनिबार उनलाई अन्य दिनभन्दा बढी धपेडी थियो । एकै दिन चारवटा शव व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा थियो । बिहान ७ बजेदेखि शव निकाल्न पीपीई सेट लगाएर बसे पनि नेपाली सेनाको टोली ११ बजेमात्रै आइपुग्यो । ‘यति सकेर खाऊँला भनेको, फेरि अर्को बिरामी सिकिस्त छ रे,’ उनले थकित भावमा साथीसँग भनिन् । उनी भेरी अस्पतालको कोभिड वार्डमा हेल्परको काम गर्छिन् । चार महिनाअघि नेपालगन्ज आएकी हुन् । श्रीमान् बितेपछि छोराछोरी पाल्न रोजगारी अति जरुरी थियो । भेरी अस्पतालमा हेल्परको आवश्यकताबारे सुनिन् । उनले सुरुमा कोभिड सर्ने डरले मन खुम्च्याइन् । परिवारको भोको पेट र आर्थिक अभावले जागिरतिर धकेल्यो । जागिर पाएको दिन उनलाई खुसी र दुःख दुवै एकसाथ भयो । खुसी यस अर्थमा उनले घरखर्च पुर्‍याउने भइन् । दुःखचाहिँ कोरोना सर्ने डरले लागेको थियो । ‘घरमा छोराछोरीले के काम गर्नुहुन्छ ममी भनेर सोध्छन्,’ उनले भनिन्, ‘मैले अरू नै काम भनेर ढाँटेकी छु ।’ यसरी झूटो बोलेर जागिर गर्नुका पछाडि सन्तानकै मायाले बाध्य बनाएको उनको भनाइ छ । ‘परिस्थितिअनुसार झूटो पनि बोल्नु पर्दोरहेछ,’ उनले भनिन्, ‘थाहा पाए छोराछोरीले मन दुखाउँछन् ।’
शववाहन व्यवस्थापनमा उनकी साथी शोभा चौधरी पनि सँगसँगै खटिएकी थिइन् । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाकी २८ वर्षीया शोभा संक्रमित शवको फोहोर उठाउने, डस्टबिनमा राख्ने काम गर्छिन् । धेरैजसो हात प्रयोग हुने भएकाले उनले दुईवटा ग्लोब्स लगाएकी थिइन् । ग्लोब्सबाट आउने पसिनाले हात खाएको छ । ‘ग्लोब्सभित्रबाट हात चिलाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘पोल्छ ।’ नेपालगन्जको प्रचण्ड गर्मीमा आङको एकसरो लुगा थेग्न मुस्किल पर्छ । यहाँका स्वास्थ्यकर्मी भने चौबीसै घण्टा पीपीई लगाएर खटिएका छन् । आफ्नो शरीरभन्दा ठूलो प्लास्टिकले बेरिएको खुट्टा घिसार्दै स्टाफ नर्स प्रमिला अस्पतालको वल्लो र पल्लो वार्ड घुमिरहन्थिन् । एकैछिनमा उनी हातमा अक्सिजनका लामा लामा पाइप बोकेर दौडिएको अवस्थामा देखिन्थिन् । छिनमा अक्सिजनका सिलिन्डर तान्दै गरेको भेटिन्थिन् । थाकेर लखतरान भएकी उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा थिइनन् । मुख सुकेर प्याक–प्याक भएको बताउँदै उनी अनवरत बिरामीको सेवामा खटिएकी थिइन् । ‘बिहान घरबाट कालो चिया खाएर अस्पताल आएकी थिएँ, बिरामीको चाप बढेर खाने फुर्सद पाएकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ पानी खाने फुर्सद त छैन ।’ अस्पतालले खाना उपलब्ध गराउँछ । तर, त्यही प्याकेटको खाना पनि तातो नखाएको थुप्रै दिन भइसक्यो । रातदिन खटिएकी प्रमिलालाई काम गर्ने ऊर्जा कहाँबाट मिल्छ ? उनले भावुक हुँदै भनिन्, ‘आमाबुबाले बहादुर छोरी भन्नुहुन्छ, त्यही हो, थप ऊर्जा ।’
पीपीईले निथ्रुक्कै भित्री पहिरन भिज्छन् । तिर्खाले ओठ सुक्खा हुन्छ । तिर्खाएका बेला बिरामी हेर्दाहेर्दै पानी खान डर लाग्छ । यस्तो बेला प्रमिला पसिनाले ओठ भिजाएर चित्त बुझाउँछिन् । उनीजस्तै संक्रमित बिरामीको हेरचार गर्दै थिइन्, स्टाफ नर्स कमला नेपाली । दैलेख घर भएकी उनी अस्पतालमा काम गर्दागर्दै संक्रमित भइन् । ज्वरो आएको, टाउको दुखेको थियो । आँखा थकित र त्रस्त देखिन्थे । तैपनि उनी संक्रमित बिरामीको हेरचाहमा लागेकी थिइन् । आफू संक्रमित भइसकेपछि पनि उनको मनले आराम पाउन चाहेन । ‘स्टाफ कम हुनुहुन्छ, गम्भीर अवस्थाका बिरामी थपिइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘बिरामीको मायाले बेड रेस्ट गर्न चाहिनँ ।’ कमलाका अनुसार धेरै संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले बिदा नबसेर बिरामीको सेवा गरिरहेका छन् । कोभिड वार्डमा खटिएकी डा. प्रतिज्ञा आचार्यको आवाज सुकेको थियो । उनी आफैंलाई ज्वरो आएको चार दिन भयो । पीसीआर जाँच गरे कोरोना हुन सक्छ । तर उनलाई आफ्नै शरीरको स्वास्थ्य जाँच गर्ने फुर्सद छैन । काठमाडौंबाट कोभिडकै लागि काम गर्न उनी स्वेच्छाले ७ महिनाअघि भेरी अस्पताल आएकी थिइन् । दिनानुदिन आईसीयूमा राख्नुपर्ने बिरामी थपिएपछि स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मेवारी थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनले सुनाइन् ।
महामारी सुरु भएदेखि नै गत वर्ष कोरोना उपचारका लागि छुट्याइएका अस्पतालमा केही चिकित्सक तथा नर्सले निरन्तर काम गरिरहेका छन् । उनीहरू न आफ्नो परिवारसँग नजिक बस्न पाउँछन्, न त खुलेर हाँस्न र काम गर्न । कोरोना अस्पतालमा काम गर्दा सामाजिक रूपमा भएको हेलालाई मनमै राखेर काम गरिरहेका उनीहरू बिरामी बचाउन पाउँदा हुने खुसीमा अन्य सबै दुःख बिर्सेको बताउँछन् । खटिएकामध्ये कतिपय आफैं पनि संक्रमित भएका छन् । बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा फोकल पर्सनका रूपमा कार्यरत छन् फिजिसियन डा. सुदर्शन थापा । पहिलेभन्दा अहिले काम गर्न साह्रै अप्ठ्यारो परिस्थिति रहेको उनले बताए । ‘गत वर्ष बिरामी अस्पतालमा सामान्य अवस्थामै आउने भएकाले धेरैलाई निको बनाएर घर पठाउन पाइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यही रोगका बिरामी अहिले गम्भीर अवस्थामा आउँछन्, बचाएर फर्काउन सकियोस् भन्ने मात्र मनस्थिति रहन्छ ।’ पेसादेखि भाग्न नमिल्ने भएकाले जसरी पनि उपचारको काममा खटिनुपर्ने मानसिकता बनाएर टिमले काम गरिरहेको थापाले सुनाए । अनेक उपाय लगाउँदा लगाउँदै पनि बेड अभाव, अक्सिजनको कमी, औषधिको समस्या आदिले निराशाजनक अवस्था आइरहेको उनले बताए । परिवारसँग टाढिएर काम गर्दाको भावनात्मक पीडा र बिरामीको दयनीय स्थिति दुवैले पिरोल्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘रोग रहुन्जेल समाजमा स्वास्थ्यकर्मीले बोल्न, हाँस्न र बस्न सहजै पाउने वातावरण छैन ।’ यसले मनोसामाजिक वितृष्णा बढाएको उनले बताए । मानिस तर्किने, आफन्त टाढिने र समस्या पर्दा आफूहरू नै चाहिने विषयले भने गर्व महसुस गराउने उनले बताए ।
भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा फोकल पर्सन डा. आरिफ हुसैनले महामारीले स्वास्थ्यकर्मीका हकमा सरकारलाई गम्भीर बनाउन नसकेको बताए । बेड अभावमा कसरी उपचार गर्ने भन्ने तनावका बेला आफ्ना बिरामीलाई जसरी पनि बेड उपलब्ध गराउनूस् भनेर आउने फोनले सास्ती भइरहेको उनले सुनाए । ‘सरकारले खाजा, खाना र बास बस्ने व्यवस्था नगरिदिँदा परिवारसँग एक्सपोज हुनु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी जोखिममा काम गर्दासमेत सुविधा नपाएपछि मनोबल गिर्छ र मनभरि पीडा लिएर काम गर्नुपर्छ ।’ उनीसँगै ६ जना मेडिकल अधिकृत र १२ जना नर्सले काम गरिरहेका छन् । सबैको गुनासो सुन्ने गरी आफूले जिम्मेवारी लिएकाले उनीहरूकै लागि पनि आफू बलियो देखिने गरी काम गर्ने गरेको हुसैनले बताए । १० वर्षकी छोरीले घर कहिले आउनुहुन्छ भनेर सोध्दा के जवाफ दिने भन्ने कुरा नै मनमा खेलिरहेको कोरोना विशेष अस्पताल बुटवलकी स्टाफ नर्स इन्चार्ज शर्मिला ज्ञवालीले बताइन् । तिलोत्तमा–४ की उनी एक सातादेखि घर गएकी छैनन् । ‘बिरामी छाडेर जाने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् । आईसीयूमा पस्नुअघि पीपीई लगाउने, साँझसम्म पानी, खाना नखाई शौचसमेत रोकेर काम गर्दा हुने समस्याको बयान शब्दमा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘मुख सुक्दा पानी पिउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘आँखाअगाडि ठीक देखिरहेका बिरामीको मृत्यु हुन्छ । उनीहरूको आवाज कानमा गुन्जिरहन्छ ।’
विभिन्न समस्या र जोखिमका बीच घर र अस्पताल गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीका लागि बस्ने र खाने व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनुपर्ने उनले बताइन् । ‘महामारीमा काम गरिरहँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई सबैभन्दा खट्किएको पाटो हो, भावनात्मक र सामाजिक सहयोग,’ ज्ञवालीले थपिन्, ‘३१ जना सहकर्मीलाई कोरोना कक्षमा काम गर्न हौसला प्रदान गर्न र बिरामीको ज्यान बचाउन पाएकामा खुसी बन्ने वातावरण बनाउन आफ्नो मनोभावना दबाउने गरेकी छु ।’ डा. प्रतिमा भण्डारीले एक वर्ष संक्रमितकै उपचारमा बिताइन् । त्यो क्रम अझै जारी छ । पढ्नका लागि जागिर छाड्ने तयारी थालेकी उनले बिरामी र आफन्तको आँसु देखेपछि रोकिएको सुनाइन् । ‘म र मजस्तै स्वास्थ्यकर्मीले गरेनौं भने कसले गर्ला भन्ने लागेर छाड्न सकिनँ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्ना लागि कसैसँग गुनासो गर्ने वा सुविधा खोज्ने कुरालाई पाखा लगाएर बिरामीका लागि काम गरिरहेका छौं ।’ अहिले एक बिरामीको शव राख्न नपाउँदै अर्को खप्टाउनुपर्ने हालतले कोरोनालाई केही होइन भनेर सोच्नु ठूलो गल्ती हुने उनको भनाइ छ ।
कोरोना संक्रमण तीव्र, बेड अभाव भएपछि भुइँमै ...
उपत्यकामा थप कडाइ गर्ने तयारी -प्रमुख जिल्ला ...
साढे १ लाख घुससहित नापी सर्वेक्षक पक्राउ
मधेसमा दलाल पूँजीवादको भण्डाफोर गर्दै हिँडेका घनश्यामलाई अर्थ समितिको आश्वासन
छापा मार्न गएको प्रहरीलाई बसपार्कमा घुस अफर, २८ समातिए
बूढानिलकण्ठका ३ वडामा घर बाहिर निस्किए ५०० जरिवाना
प्रधानन्यायाधीशमा मिश्रको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन
आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लाइसेन्स पाउन सजिलो
कला र संस्कृतिदेशमनोरञ्जन
Mr & Miss Glamorousicon Season4||Who Will Be Next|More Detail Coming soon
स्थानीयले गरे राजमार्ग अवरुद्ध-अवैध उत्खनन्‌को विरोध गर्ने युवकको टिपरले किचेर हत्या
एसईई नतिजा : १०६ जनाको जीपीए ४
प्रकाशक : राम कृष्ण कर्माचार्य
व्यवस्थापन : रुप कृष्ण कर्माचार्य
भारतबाट स्वदेश फर्कंदै गरेका नेपाली एसएसबीबाट कुटिए
२४ जेष्ठ २०७५
सुख्खा बन्दरगाहमा ‘लापरवाही’, कन्टेनर उठाउने मेशिन जल्यो
के अनमोलले बलिउडको टिकट काटेकै हुन् ?
निर्माण कार्य नै रोक्ने ठेकदारहरुको चेतावनी
२५ जेष्ठ २०७५
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिविरूद्ध नेविसंघको प्रदर्शन (फोटोफिचर)